Gwa: Ụzọ kachasị mma iji wepụ weebụsaịtị - Ọkachamara Semalt
Nchịkọta weebụ bụ usoro mpempe data nchịkọta ma ọ bụ nchịkọta ozi site na World Wide Web. E nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-ewe ihe nchịkọta data, mana Apify bụ ọrụ kachasị mma na nke dị ike.
Apify bụ onye dị elu ihe ntanetị weebụ na ngwanrọ arụmọrụ - scales along with. Ọ na-ewepu ozi site na saịtị dị iche iche ma dezie ya na nkeji nkeji. Ị nwere ike ịnakọta ma jikọta data site na iji ngwá ọrụ a. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ozi site na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ihe, Apify ga-ahazi ozi dabere na agba, ọnụahịa na nha ngwaahịa. A kọwara ụfọdụ n'ime uru ndị dị na ya n'okpuru:
1. Ụzọ dị mfe iji wepụ weebụsaịtị:
Site na Apify, ịkwesighi iji aka gị mepụta akwụkwọ akụkọ. Ngwá ọrụ a na-ebugote ọtụtụ akwụkwọ na CRM gị. Ọ na-eji API wepụ data site na saịtị. Ngwa na-emepụta data dị elu banyere amụma ihu igwe, ọnụ ahịa ngwaahịa, na ịzụ ahịa ahịa. Ọ na-agbapụ ibe weebụ gị ma mezie ebe obibi gị.
2. Kwesịrị ekwesị maka onye ọ bụla:
Apify kwesịrị ekwesị maka mmemme, ndị na-abụghị ndị coders, ụlọ ọrụ, freelancers, ndị nta akụkọ, webmasters, obere na ọkara-ụlọ ọrụ, na ndị nyocha data. Dịka nwa akwụkwọ, ịnwere ike iji Apị iji nakọta ozi maka ọrụ nyocha gị. Nke a website scrape r dị mma ma mmalite ma top ụdị. Ọ na-enyere anyị aka ileba anya na saịtị ndị asọmpi na ịzụlite ahịa ọhụrụ na ịzụ ahịa.
3. Ngwá ọrụ dị ukwuu iji rụọ ọtụtụ ihe aga-eme:
Enyemaka na-enyere aka ịmepụta saịtị ọhụrụ mgbasa ozi, na-ewuli ndetu ederede ụgbọ elu, nyochaa ezigbo ụlọ ahịa ahịa, nyochaa ngwaahịa, wee rụọ ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. N'ezie, ị nwere ike igosi ma ntinye data na ọrụ ntanetị ọrụ na ọrụ a ma nweta ozi na-ezighị ezi n'ihe gbasara nkeji.
4. Nhazi nhazi:
API Apify na-achọta ma weputa data bara uru maka gi. JSON na-ejikarị ya dịka ihe nchekwa nchekwa nzipu n'etiti onye ahịa na sava weebụ. Ọ na-emekwa ka ị dị ọhụrụ banyere ụdị ahịa ahịa ugbu a ma na-enye nzaghachi banyere ogo data. Ị nwere ike iji nchịkọta API achọpụta ịchọta ezigbo bọtịnụ na ịntanetị. Na-enyocha data nchịkọta ma na-emepụta ndepụta dị iche iche nke ngwaahịa maka gị.
5. Nhọrọ IP dị iche iche:
Otu n'ime atụmatụ ndị dị na Apify bụ na ọ na-enye nhọrọ IP dị iche iche. Ị nwere ike ịdenye aha ya atụmatụ ọrụ ya ma jiri aka ya rụọ ọrụ na net. Ị nwere ike ịnweta ọtụtụ narị adreesị IP pụrụ iche ma mee ọtụtụ arụ ọrụ na-emegharị ihe na oge na oge.
6. Jikọọ Jikọọ na ngwa ọdịnala kachasị amasị gị:
N'adịghị ka ndị nkịtị ngwaọrụ scraping , Apify nwere ike jikọọ na ngwa weebụ kachasị amasị gị. Ọ bara uru maka onye mmemme na-enyere ha aka ịhazi ma nyochaa nsị arụpụta. Na Apify, ị nwere ike ịnweta nghọta nke weebụsaịtị na ịnweta ọkwa. Ịnwere ike ibudata ngwa na smartphone gị ma rụọ ọrụ gị n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
7. Ihe niile gbara ọsọ:
Ị ghaghị ịkọrọ ya ihe ịchọrọ igwu ma ọ bụ kpochapụ, Ngwa ga-arụ ọrụ ya na akpaghị aka. Na ọrụ a, ị nwere ike wepu weebụsaịtị na blọọgụ na kuki, redirects, na AJAX. Ịkwesighi ịwụnye ihe mgbakwunye ihe nchọgharị ọ bụla. Nbudata bụ ezigbo ihe ọzọ iji bubata. io, Octoparse, Uipath, Screen Scraper na Kimono Labs.